I-China BBO Umvelisi wekristale kunye noMthengisi | Ukutya
Ulwakhiwo lweCrystal: Trigonal, Iqela lesithuba R3c
Ipharamitha yomgama: a = b = 12.532Å, c = 12.717Å, Z = 6
Indawo yokunyibilika: Malunga ne-1095 ℃
Ubunzima be-Mohs: 4
Ukuxinana: 3.85 g / cm3
Ulwandiso lwee-coefficients: α11 = 4 x 10-6 / K; α33 = 36x 10-6 / K
I-BBO yicrystal ye-ultraviole ephindaphindwe kabini ngekristale.Iyikristale engathandekiyo engeyiyo, kunye nesalathiso esiqhelekileyo sokuthintela (akukho) sikhulu kunesalathiso sokungaqhelekanga esingaqhelekanga (ne). Zombini iindidi zodidi I kunye nohlobo lwesibini lokuthelekiswa kwesigaba kunokufikelelwa ngokulungiswa kweengile.
I-BBO yikristale ye-NLO esebenzayo kwisizukulwana sesibini, sesithathu nesesine se-Nd: i-YAG lasers, kunye neyona NLO crystal ilungileyo kwisizukulwana sesihlanu seHarmonic e213nm. Ukuguqulwa kokusebenza okungaphezulu kwe-70% ye-SHG, 60% ye-THG kunye ne-50% ye-4HG, kunye ne-200 mW yokuphuma kwi-213 nm (5HG).
I-BBO ikwayikristale efanelekileyo ye-intracavity SHG yamandla aphakamileyo Nd: lasers YAG. Kwi-intracavity SHG ye-acousto-optic Q-switched Nd: i-laser ye-YAG, ngaphezulu kwe-15 W yamandla aphakathi kwi-532 nm yaveliswa yikristale ye-BBO eyenziwe nge-AR. Xa ityhilwa yimveliso engama-600 mW SHG yemowudi etshixiwe kwiNd: YLF laser, ukuphuma kwe-66 mW kwi-263 nm kwaveliswa kwiBrewster-angle-cut-BBO emgodini wangaphandle ophuculweyo.
I-BBO inokusetyenziselwa usetyenziso lwe-EO. Iiseli ze-PBOels Pockels okanye i-EO Q-Swichi zisetyenziselwa ukutshintsha imeko yokukhanya kokudlula kuyo xa kusetyenziswa ivolthi kwii-electrode zeekristali ze-electro-optic ezinjenge-BBO. I-Beta-Barium Borate (β-BaB2O4, BBO) ene-charactors ukucaca ngokubanzi kunye namanqanaba afanayo, amanqanaba aphezulu angahambelaniyo, umda omkhulu womonakalo kunye ne-homogeneity ebonakalayo ye-optical kunye neepropro-optical iipropathi zibonelela ngamathuba anomdla kwizicelo ezahlukeneyo ze-nonlinear optical kunye nokusetyenziswa kwe-electro-optic.
Iimpawu zeBBO crystals:
Isigaba esibanzi sothelekiso lomgama ukusuka kwi-409.6 nm ukuya kuma-3500 nm;
• Ingingqi ebanzi yokuhambisa ukusuka kwi-190 nm ukuya kuma-3500 nm;
• Umlinganiso omkhulu osebenzayo wesibini-ye-harmonic-generation (SHG) malunga namaxesha amathandathu amakhulu kunalawo e-KDP.
• Ukuhambelana okuphezulu kwe-homogeneity ene-δn ≈10-6 / cm;
Ubushushu bebhendi ebanzi emalunga nama-55 ℃.
I-BBO inokuthambeka okuphantsi kokufuma. Abasebenzisi bayacetyiswa ukuba babonelele ngemeko ezomileyo kuzo zombini izicelo kunye nolondolozo lweBBO.
I-BBO ithambile kwaye ke ifuna amanyathelo okhuseleko ukukhusela indawo yayo ecoliweyo.
Xa uhlengahlengiso lwe-engile luyimfuneko, nceda ugcine ukhumbula ukuba i-angle yokwamkela ye-BBO incinci.
Ukucaba ngaphantsi kwe-L / 8 @ 633nm
Ukuphambuka kwamaza ngaphantsi kwe-L / 8 @ 633nm
Ukufana Seconds20 imizuzwana yeArc
Ukunyamezelana kweAngle -0.25
Umqobo womonakalo [GW / cm2] > 1 ye-1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (ipolishiwe kuphela)> 0.5 ye-1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (AR-camera)> 0.3 ye-532nm, TEM00, 10ns, 10HZ (AR-camera)
Ulwakhiwo lweCrystal Trigonal ， Iqela lesithuba R3c
Ipharamitha yeLattice a = b = 12.532Å, c = 12.717Å, Z = 6
Indawo yokunyibilika Malunga ne-1095 ℃
Ubunzima be-Mohs 4
Ukuxinana 3.85 g / cm3
Ulwandiso lwee-Coefficients α11 = 4 x 10-6 / K; α33 = 36x 10-6 / K
Ukusebenza ngokuQhelekileyo kokuSebenzayo ⊥c: 1.2W / m / K; // c: I-1.6W / m / K
Uluhlu olungafihliyo 190-3500nm
ISigaba se-SHG Uluhlu oluThelekisekayo 409.6-3500nm (Uhlobo I) 525-3500nm (Uhlobo II)
I-Coefficients ye-Thermal-optic (/ ℃) dno / dT = -16.6x 10-6 / ℃
Coefficients zokufunxa <0.1% / cm (kwi-1064nm) <1% / cm (kwi-532nm)
Ukwamkelwa kweAngle 0.8mrad · cm (θ, Uhlobo I, 1064 SHG)
1.27mrad · cm (θ, Uhlobo II, 1064 SHG)
Ukwamkelwa kobushushu 55 ℃ cm
Ukwamkelwa kweSpectral 1.1nm · cm
I-Angle yokuhamba 2.7 ° (Uhlobo I 1064 SHG)
3.2 ° (Uhlobo II 1064 SHG)
I-NLO Coefficients deff (I) = d31sinθ + (d11cos3Φ- d22 isono3Φ) cosθq
Isixhobo (II) = (d11 sin3Φ + d22 cos3Φ) cos2θ
Izinto ezingafunekiyo zeNLO I-d11 = 5.8 x d36 (KDP)
(λ kwi μm) No2 = 2.7359 + 0.01878 / (λ2-0.01822) -0.01354λ2
Ii-coefficients zombane =22 = 2.7 emva kwemini / V
Ombane Half-wave I-7 KV (kwi-1064 nm, 3x3x20mm3)